Ndezvipi zvakanakira itsva Chili hunde nokuveza muchina - China Lu Lu Agricultural Equipment
Chili hunde nokuveza Machine
Large chilli hunde nokuveza Machine
Svikiro chilli hunde nokuveza Machine
Small chilli hunde nokuveza Machine
Land Kurima Series
Chili ibwe kubvisa muchina
Chili nokuveza Machine
Chili kugadzira dzino
Patent nokuti kuvamba
Ndezvipi zvakanakira itsva Chili hunde nokuveza Machine
Ndezvipi zvakanakira itsva chili hunde nokuveza muchina? Chili hunde nokuveza muchina chinhu chiri chikamu chakakosha okurima kugadzirwa mune dzimwe nzvimbo. It chinhu chisingadzivisiki chinodiwa okurima kukura kugadzira munhu anonzwisisa uye vakarongeka Chili hunde okurwadzisa muchina. A kwakakwana capsicum dispenser ine zvikamu zvishanu: zvokudya ezvinhu, pakukurukura hurongwa, hune simba maitiro, uye vachidzikisa gadziriro.
Chii tarisiro Chili hunde kucheka muchina? Mubvunzo haafaniri kupindurwa uchichimbidza. Nokuti chaiko kugadzirwa uye upenyu, hazvina kuoma kuwana zvishoma pfungwa kuchengeta. Mumakore achangopfuura, zvinonyatsorehwa kupiwa uye kudiwa Chili zvigadzirwa kwakawedzera gore negore pamusoro nguva. Parizvino, chete muna Qingdao, ipapo misha yakawanda nemataundi mubasa kugadzirwa uye kubudiswa Chili zvigadzirwa pamwero vari. Somugumisiro, nhamba yemakambani vatengi Chili hunde nokuveza muchina ichiri zvikuru zvinoshamisa. Uyezve, munyika, Hunan, Sichuan nevamwe mapurovhinzi China vari zvakare guru Vanoburitsa Chili enyika. Uye mune dzimwe nzvimbo izvi, The basa Chili zvigadzirwa ichiri epakutanga padariro handwork, saka kana paine Chili muchina kuisa chilli michini pamusoro pamusika, zvichaita vanongoerekana kuchingamidzwa maererano nenhamba yakakura kwazvo murimi mudiki shamwari. Uye izvozvo chigadzirwa achaita kukubatsira kuvandudza kunyatsoshanda Chili kugadzirwa.
Tiine chichiitwa kukura zvigadzirwa, nokuti zvose mhando yakakunakira michina muupenyu, ivo vari kutanga kuonekwa mumusika. chilli hunde nokuveza muchina uri mumwe wavo. Kugadzirisa Chili siyana zvakadai? It vangave zvakakodzera kusarudza kubva zvakadai mabasa uye nenheyo.
Chimiro uye waivako:
1.Performance zvinhu: midziyo iyi ainyanya kushandiswa yakaoma uye akanyorova chilli yokuvevura, midziyo kucheka kushanda mukuru, Chili kukuvara pasi, mukuru efficacy, zvinoenderana siyana nemarudzi uye Chili chimiro (Need kuti customized), chete muchina efficacy kunopfuura 5 nguva pamusika vanhuwo zvigadzirwa, chokupika yose muchina asvika international tiite chechetere. chigadzirwa ichi, vaisanganisa nokuita upiyona michina yakadai achibvisa tsvina uye kutsanangura, anogona kuita otomatiki kuita yose muchina kuita basa rinokosha. Chinhu chinokosha zvokushandisa kubudiswa vakawanda zvokurima zvigadzirwa. Inogona kutsiva vazhinji manpower, kunze mukushanda cost, uye kuvandudza zvikuru nokushanda kunyatsoshanda.
2. Main achishanda musimboti: mu nedanho nesefa Drum rinopfungaira, kunze nokuveza banga uye nomusero humburumbira rusvingo pave muchina kuti Chili pamupinyi kuti ichipfuura nomusero buri hinji simba, kuti awane chinangwa achibvisa mubato Chili.
Post nguva: Sep-10-2018
Kana isu achicheka yakachena Chili, Maoko edu haana ...
Chii musika kukosha Chili ...
Ndezvipi pfungwa kutarisirwa ari ...
Ndezvipi zvakanakira itsva Chili hunde ...
Ndezvipi zvakanakira chilli hunde bv ...